ချွေတာရေး … | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » ချွေတာရေး …
Posted by kotun winlatt on Feb 27, 2012 in Copy/Paste | 18 comments
ကျနော်ကွန်ပျူတာရှေ့မှာ ထိုင်နေချိန်တွင် အခန်းအပြင်ဘက်မှာ ဒက်ဒီနှင့်မာမီ
အကြောင်းကတော့ ဒက်ဒီက ပန်ကာဖွင့်ထားတာကို မာမီက မီတာခတက်တယ်
ဒီလိုနဲ့ တစ်ယောက်တစ်ခွန်းပြောနေကြတယ်ခင်ဗျ….။ လိုအပ်လို့တွေရော
ဒီလိုနဲ့ ကျနော်ဘက်ကို ပြဿနာက ဦးလှည့်လာပါတယ်…။ ဒက်ဒီက မီတာခတက်တာ
သြော်… မီတာခတွေတိုးတက်လာတဲ့ ဂယက်ပေါ့ခင်ဗျာ…။ ဒါနဲ့ ပြောရဦးမယ်ဗျို့….
အရင်လက ကျနော်တို့ရွာမှာ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ခြိုးခြံချွေတာသုံးစွဲရေးဆိုပြီး
လျှပ်စစ်ငှာနက စာတွေဝေတယ်….။ ကျနော့်တို့ အိမ်ကိုလည်းဝေသပေါ့..။
ပြီးတော့လျှပ်စစ်ငှာနက ၀န်ထမ်းလေးကပြောတယ်… အစ်ကိုရေတဲ့ မီးလေးသုံးပေး
ပါဦးတဲ့.. အစ်ကိုမီတာက ယူနစ်မတက်လို့ဆိုပဲ….
ဒါနဲ့ ကျနော်လည်းး အေးလေကွာ..မင်းတို့ကချွေတာသုံးစွဲဆိုလို့ ချွေတာထားတာလေလို့
ပြန်ပြောသပေါ့…။ ဒီတောဝန်ထမ်းလေးက ဟုတ်တော့ဟုတ်ပါတယ် အစ်ကို ဒါပေမယ့်
လည်း ယူနစ်တွေကွာနေလို့ပါတဲ့… ကျနော်နားရှုပ်သွားပါတယ်… ဘာလို့ယူနစ်က
ကွာရတာလဲဆိုတော့…. သူကပြောတယ်…တစ်လနေလို့မှ တစ်ယူနစ်မှ မတက်လို့လည်း
မဖြစ်လို့ မီတာဖတ်တဲ့ အခါ ယူနစ်ကိုအမှန်မဖတ်ပဲ တိုးဖတ်ထားလို့ပါတဲ့လေ…
ကောင်းရောဗျာ…မတက်တော့လည်း မတက်သလိုဖတ်လို့ မရလို့လားမသိချေ…
ယူနစ်တက်တက် မတက်တက်ပေါ့.. မီတာထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ခ တစ်လ
တစ်ထောင်ပေးထားပြီပဲ…. မတက်ရင် မဖတ်နဲ့ပေါ့… ကိုယ့်အိမ်မှာ တပ်ထားတဲ့
မီတာကို တစ်လတစ်လ အလကားနေရင်း ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ခ တစ်ထောင်ရ
နေတာကို နည်းနေလို့လားတော့မသိ…. ဒါမှမဟုတ်…ကျနော်နားလည်သော
ချွေတာသုံးစွဲခြင်းနှင့် သူပြောသောချွေတာသုံးစွဲခြင်းဆိုတာ အဓိပ္ပါယ်လွဲနေ၍လား
မသိချေ…။ ချွေတာကြပါ..ချွေတာကြပါလို့..သမ္မတကြီးကလည်း ပြောတယ်ခင်ဗျ..
ကျနော်တို့ပြည်သူတွေ ချွေတာနေခဲ့ရသည်မှာ ကြာပါပြီ …. အစားချွေတာ အ၀တ်
ချွေတာ ချွေတာနိုင်သမျှ ချွေတာခဲ့ကြရတာပါ …။ အစားဆိုရင်လည်း မသေရုံ
အ၀တ်ဆိုရင်လည်း အရှက်လုံရုံ ၀တ်နေခဲ့ကြတာပါ… ဒါတောင်မှ မလုံလောက်သေး
ဘူးထင်ပါ့ဗျာ… ချွေတာကြ..ချွေတာကြပါဆိုတော့… ကျနော်တို့တွေ မစားမသောက်ပဲနေ
မ၀တ်ပဲနေကြရုံပဲထင်ပါ့ဗျာ… ဒီကြားထဲ ၀န်ထမ်းလစာတိုးပေးဖို့ပြောတော့….
လွှတ်တော်ရဲဖြေရှင်းချက်မှာ သန်းခြောက်ဆယ်သော ပြည်သူတွေမှာ တစ်ဦးလျှင်
ဒေါ်လာနှစ်ရာစီ အကြွေးတင်နေပါသတဲ့…. ( ကြားရတဲ့ သတင်းဖြစ်ပါတယ်… ကောလဟလ
ဖြစ်ရင်လည်းဖြစ်မပေါ့လေ..) ကဲ… ကျနော်တို့တွေ ဒီလောက်ချွေတာနေပါလျက်နဲ့
ဒီလိုတွေဆိုတော့ ချွေတာနေရုံနဲ့ ပြဿနာ မပြေလည်နိုင်ဘူးထင်ပါရဲ့နော်….
“ဟဲ့ … ကောင်… မိဘတွေက ဒီလောက်ပြောနေကြတာတောင်
နင်က … ကွန်ပျူတာ မပိတ်သေးပဲ ဘာလုပ်နေတာတုန်းးးးး တစ်နေ့..တစ်နေ့…
ဒီကွန်ပျူတာရှေ့မှာပဲ … ငါးပြားမရ …. ဆယ်ပြားမရနဲ့ … မပြောလိုက်ချင်ဘူး…
ငွေရပေါက် … ရလမ်းလေးလည်း ရှာပါဦးဟဲ့…. နင့်ကိုတော့ ပြောမပြောချင်ဘူး..”
မွေးသမိခင်နဲ့ ကျွေးသဖခင်ရဲ့ ပြိုင်တူ အသံကြောင့်… ကျနော်..ဟဲ..ဟုတ်ဗျ…
ဟုတ်….. ဆိုပြီး… ကွန်ပျူတာကိုပိတ်… အသာလေးအိမ်ကနေ လဘက်ရည်ဆိုင်ဆီ
ကို လစ်ထွက်သွားလာရပါတယ်… ကဲ..သူငယ်ချင်းတို့ရေ….
မီတာမတက်ခင်ကဆို ရပ်ကွက်ထဲမှာ ညဆိုလင်းထိန်နေတာဘဲ
အိမ်ကလူတွေက မင်းအားရှိကွန်ပြူတာရှေ့မှာဘဲ အရည်မရအဖတ်မရတွေလုပ်နေတာတဲ့
လူငယ်ဆိုတာ တစ်နေ့မှာ လူကြီးတွေဖြစ်လာမယ်ဆိုတာကို…
အေးလေလူကြီးတွေက အရမ်းပြောရခက်တယ်.. ဟွန်း
အဲ့အချိန်ရောက်ရင်သာ ကျနော်တို့ လူငယ်တွေကို
ကျုပ်သမဒ ဖြစ်ရင် ကိုယ်ပိုင် ဆိုလာပြားတွေ အခမဲ့ တပ်ပေးမယ်..
အဲဒီ အီးပီစီ တွေကို အားကိုးစရာမလိုတော့ဘူး
လုပ်ပိုင်ခွင့်သာ ပေး..ကျုပ်ဘာမှ မလုပ်တတ် အဲလေ..ကျုပ်အကုန် လုပ်ပေးမယ်..
ဒါနဲ့ ကဖောက်ပေါ်က ဘာပါတီလည်းးးးဟင်…
များတို့ က ချာပါတီ ပါတော့
ကိုထွန်းဝင်းလတ်ရေ ချွေတာရေးတော့ ချွေတာရေးပါဘဲ။ကျနော်တို့ တတွေချွေတာသုံးစွဲလာခဲ့သမျှလဲ
ပေးခဲ့ရတာပါဘဲ။ကျနော်တို့ မြို့ ဆိုရင်ခုမှ(၂၄)နာရီမီးဆိုတာ မြင်ဖူးတာမကြာသေးပါဘူး။အစိုးရမီးမဟုတ်
ဘူးနော်။ပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီကနေပေးတာပါ။အိမ်တိုင်းက အခြေခံဆယ်ယူနစ်ကို(၂၅)ကျပ်နှုန်းနဲ့ အထက်ကို
(၄၅၀)ကျပ်ပေးဆောင်နေရတာပါ။မီတာခဈေးအကြီးဆုံးမြို့ လို့ ပြောနိုင်ပါတယ်။
အားပါးပါး သဋ္ဌေးမြို့ ပါလား
မီတာခ တစ်ယူနစ်ကို ၄၅၀ ကြီးလား
ဟုတ်မှ လုပ်ပါ မောင်ကာလုရယ်
ဒီအတိုင်း ဆို သေရချည်ရဲ့
သရဲပြေး ဆိုတော့ လူ့လောက အကြောင်းဘယ်သိရှာပါ့မလဲ။။ :grin: အစိုးရ မီး မရတဲ့ နေရာတွေ မှာ အထူးသဖြင့် ရခိုင်ဒေသ တွေမှာ တစ်ယူနစ် ၄၅၀ ပေးရပါတယ် ။ ဒါတောင် တစ်ညလုံးမရပါဘူး ။
ဆောရီး ကိုသန်းထွဋ်ဦးရေ ..မီး ၂၄ နာရီ ပေးပြီဆိုတာ မသိလိုက်ဘူး ။ အရင် က ည ၁၀ နာရီလား ၁၁ နာရီ အထိလားဘဲ မီးလာတာ။
ဟုတ်တယ်လေ ကိုထူးဆန်းရေ သံတွဲမှာအရင်တုန်းက အစိုးရEPC ကနေမီးပေးနေတာပါ။
ည(၆)နာရီကနေ (၉)နာရီထိပေါ့။တခါတလေတော့လဲ ပုံမှန်ရယ်လို့ မရှိဘူး။(၂)နာရီလောက်ဘဲ
မီးပေးနိုင်တာတွေလဲရှိနေတာပါဘဲ။နောက်တော့ မြို့ မီးလင်းရေးကော်မတီပေါ့ဗျာ။သူလဲသိပ်မလွမ်း
ပါဘူး။ရှုံးတယ်ချည်းဘဲအော်နေတာ။တစ်ယူနစ် (၆၅၀)ကျပ်နဲ့ တစ်နေ့ ကို(၂)နာရီဘဲပေးနိုင်ခဲ့တာ။
၂၀၁၀မှာတော့ ဖိုးသီးချိုကုမ္ပဏီကနေ တာဝန်ယူပြီး(၂၄)နာရီပြည့်မီးပေးလာတာပါ။မီတာခတွေလဲ
အရင်ထက်လျော့လာနေပါတယ်။သုံးလို့ တော့မဆိုးပါဘူး။ဒါပေမယ့် ဒီဈေးနဲ့ လဲရေရှည်တော့
အဲ့ဒီမီတာရုံးက လုပ်ချင်သလို လုပ်နေတာတော့ကြာပြီဗျို့ ။
ကျွန်မဖိုးဖိုးမသေခင်ကဆို … မီတာကိုနေ့တိုင်း ယူနစ်နဲ့ မှန်မှန်မှတ်တတ်တဲ့ အကျင့်ရှိတယ် … ။ တစ်လကျတော့ … လိုအပ်တာထက်ကို ပိုပြီး ပေါင်းထားလို့ …. ပြောလိုက်တယ် … ။
မကြာဘူး …. မီတာပျက်လို့အသစ်လဲထားတာ ပိုက်ဆံမကောက်ရသေးဘူးဆိုပြီး လာပေးပါလို့ စာထွက်လာတယ် ။ တစ်သိန်းနီးပါးပဲ ပေးရမယ့် ပိုက်ဆံက …. ။ အဖိုးဖွားတွေခေတ်ကတည်းက နေလာတာ … 1970လောက်က မီတာကို အနှစ်နှစ်ဆယ်ကျော်မှ လာတောင်းတယ်ဆိုတာ ယုတ္တိတော့မရှိဘူးလေ … ။
အဖိုးကလည်း မီတာ မှန်မှန်ဆောင်ထားကြောင်း အထောက်ထားနဲ့ရော .. မီတာ အသစ်လဲလှယ်ထားခြင်းမရှိတဲ့အကြောင်း အထောက်ထားအခိုင်မာနဲ့ ရုံးသွားပြီး ကွန်ပလိန်းတင်တော့မှ .. အဆင်ပြေပြေပြီးသွားတာ … ။ ဘုမသိဘမသိနဲ့ဆို .. အလကား .. ပိုက်ဆံပေးနေရဦးမယ် …။
ကျွန်မတို့ လက်ထက်မှာတော့ … နေ့စဉ်လည်း မီတာ ယူနီမမှတ်နိုင်သလို ၊ မီတာဆောင်ပြီးသားတွေလဲ လစဉ်တောင် အမြဲ ဖိုင်မတွဲဖြစ်တော့ဘူး .. အခုနေ .. အဲ့ဒီတုန်းကလို ပြသနာမျိုး ထပ်တပ်လျှင် … အထောက်ထားပြစရာဘာမှ မရှိပဲ တောင်း သလောက်ပေးရတော့မယ် … ။
ဆောင်းဦးလှိုင် ရဲ့ “အလှူတော်မင်္ဂလာ” ထဲက သီချင်းတစ်ပုဒ် ကို သတိရမိသဗျာ ။
စာသားလေးက “ ချွေတာမှ ဖြစ်ပါမယ် ” တဲ့
ဆောင်းဦးလှိုင် ခရေဇီးဖြစ်တဲ့ တံခါးမှူးကြီး ဆိုရင် ပိုပြောနိုင်လိမ့်မယ်ဗျို့။
ကိုပေ ကိုဘလက် ကိုစိန်သော့ ကိုကြီးမိုက် ကိုထက်ဝေး ကပေါက်ဖော် ဖရဲ ကိုရင်ဂီ အံစာတုံး ကိုထွန်းဝင်းလတ် ကိုရွှေတိုက်စိုး ကိုသန်းထွဋ်ဦး စတဲ့ စတဲ့ ရွာကာလသခေါင်းကြီးများ ဦးဆောင်တဲ့ ကာလသားများက
ချွေတာရေးအနေဖြင့် တစ်ပတ်တစ်ခါသာ ကာရာအိုကေ ဆိုပြီး ဆီမာဆတ်သွားတော့မည်ဖြစ်ကြောင်း …..
ဘီအီးကို တစ်နေ့လက်တစ်လုံးစာချန်သောက်ကာ ချွေတာမည်ဖြစ်ကြောင်း …..
ဘောလုံးကန်ရင် ဘောလုံးကို လေတစ်ဝက်သာဖြည့်၍ ကန်မည်ဖြစ်ကြောင်း …..
ကွန်ပျူတာသုံးလျှင် မော်နီတာပိတ်၍ သုံးမည်ဖြစ်ကြောင်း ……
………………… ဖြစ်ကြောင်း …